MUUQAAL: Xisbiga Wadani oo Muuse Biixi ku Eedeeyay inuu Dagaal Bilaabay | Kalshaale
MUUQAAL: Xisbiga Wadani oo Muuse Biixi ku Eedeeyay inuu Dagaal Bilaabay
Jan 11, 2018 - 2 Aragtiyood
Hargeisa (Kalshaale) Xisbiga Wadani ayaa Xukuumada uu Hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyay inaan Laga Fiirsan dagaalka ay dhowaan ku qaadeen Deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool iyagoona ka digay Cawaaqib Xumada dagaal xiligan Bulshada lageliyo.
Xoghayaha Xisbiga Wadani Siyaasi C.laahi Daamur ayaa sheegay in Waagii hore ee Kulmiye la doortay ay Bilaabeen dagaalkii KALSHAALE kaasi oo aan laga Fiirsan, Wuxuuna hada sheegay in Xiligan iyadoo Kulmiye aanu Wakhti badan haynin uu Bilaabay dagaal kale, Wuxuu sheegay in hadii ay dhab ka tahay Xuduudku ay ahayd inay aadaan Sanaag Bari oo Wasiirkii Dawlada Soomaaliya ka socday uu yimid, Wuxuuna sheegay inaanu Iman Tukaraq.
Cirro waar heedhe shaqa raadso ama ka dhabee waddaniland samayska.
Ilaa goormaad ku jiraysaa ugaadhsiga iyo daba yuuska khaladaadka dilaaga ah ee labada habrood (H jeclo iyo H Awal) ee Jeegaanland.
Ka hadal dekadda Soomaaliyeed ee Berbera ee Xabashida la wareegtay, Somaliwayn iyo beenta jeegaanland.
Ishaad ka riday meeshan habraa fooda is haysta cirona kama dhacayn karo wadini Land waayo Habraha waxay ku caan baxeen wax la dhaho MASAYR!! Wax kastoo horumar ah ama talaabo la qaadi lahaa masayr ayaa dhaafinaaya.
Mid baanse kuu sheegayaa waxaa garentee ah in in ay laf cad toobin kuhayaan shacabka reer waqooyina rubuc qarni ay been ku horjoogeen been iyo huuhaa su’aashu waxaa weeyaan